Naya Post Nepal | पल प्रकरणमा गर्जिन च’र्चित नायिका निरुता सिंह,भनिन तपाई हामी को हो ? (भिडियो हेर्नुहोस्)
पल प्रकरणमा गर्जिन च’र्चित नायिका निरुता सिंह,भनिन तपाई हामी को हो ? (भिडियो हेर्नुहोस्)
काठमाडौं । यतिबेला नेपाली कला क्षेत्र अभिनेता पल शाह प्रकरण ले तरंगित छ । एक नाबालिग गायिकाले अभिनेता शा’हवि’रुद्ध उ’जु री दिएपछि पल केही दिनदेखि प्र’हरी हि’रासतमा छन् । प्रहरीले पल लाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान जारी राख्दा यस विषयमा नेपाली से’लेब्रिटीहरु खुल्न थालेका छन् ।
सुरुको समय यस बिषयमा अ’धिकांश कलाकर्मी मौन थिए । तर प छिल्लो दिनमा भने सेलेब्रिटीहरु एकपछि अर्को गर्दै खु’ल्न थालेका हुन् । उनीहरुले यस बिषयमा गम्भीर हुन नारीको सम्मान गर्न र
बा’लबालिका’हरुका अधिकारको रक्षा गर्नसमेत आह्वान गरिरहेका बेला पल भने पछिल्ला दिनमा भित्र भित्रै टु’ट्न थालेका छन् । एका तिर नाबालिग गायिका पनि वि’क्षिप्त प’क्कै बनेकी छिन् ।
पललाई हिरासतमा भेटेर फ’र्किएका एक अभियन्ताले पल भित्र भि त्रै टु’ट्दै गइरहेको संकेत गरेका छन् । पलले उनीसँग आँफु क’मजोर बन्दै गएको र भोलीका दिनमा जे पनि हुनसक्ने संकेत गरेका छन् ।
उनीसँगको कुराकानीका क्रममा पलले आफु दो’षी नभएको र नि’र्दो ष हुँदा हुँदै पनि दोषीलाई नै जसरी हेर्न थालिएका का’रण आफ्नो धै र्यताको बाँधले अब धेरै अप्न नसक्ने कुरा उल्लेख गरेको समेत बताए का छन् ।
यो पनि ,,पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एम’सी’सी स’म्झौता’ लाई सं’सदबाट सर्वसम्मत् रुपले पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् । आइतवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले एम’सीसी’मार्फत् नेपाललाई अ’नुदान सहयोग आउनु देशको हितमा रहेकाले स त्तापक्ष र प्र’तिपक्ष मिलेर संसदबाट एकमतले पा”रित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई नेताहरुले आफ्नो लाज छोप्न बनाए को पातलो लगौटी भएको टिप्पणी गरे । भट्टराईले भने, ‘मलाई खु शी लागेको छ कतिपय हाम्रा मित्रहरुले भर्खरै एउटा समझदारी गर्नु भएको छ भन्ने मैले सुनेको छु । व्याख्यात्मक टिप्पणीमार्फत् जो उहाँ हरुले हिजो तल तलसम्म विषाक्त बनाउनुभयो,
उनले थपे, ‘बेर आयो दुरुस्त आयो भनेजस्तै बेलैमा हामीले यो बु’झ्नुपथ्र्यो । जनताको बिचमा यसरी अतिरञ्जीत कुराहरु गरेर जनतालाई भ्रममा पार्नु हुदैन्थ्यो । जो–जो साथीहरुले गर्नुभो, जुन–जुन दल र नेताहरुले गर्नुभयो । उहाँहरुले आज बुझेर वा नबुझेर त्यसलाई स’च्याउने जुन प्रयत्न गर्नु हुँदैछ । त्यसको म स्वागत गर्न चा’हान्छु ।’
२०७८ फाल्गुन २१, शनिबार प्रकाशित 1 Minute 1400 Views